ऋचा विवादमा, रिमाले तोडिन् सम्बन्ध :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
ऋचा विवादमा, रिमाले तोडिन् सम्बन्ध
किन भयो रिमाको डिभोर्स ?
काठमाडौं । ‘छक्का पञ्जा’ निर्माण युनिटसँग सम्बन्ध बिगारेकी नायिका ऋचा शर्मा पुनः विवादमा परेकी छन् । उनको नयाँ विवाद यतिखेर चलचित्र क्षेत्रमा ‘फिर्के’ काण्डका नामले चर्चित छ । ‘छक्का पञ्जा २’ हेर्ने दर्शकले महिलालाई पिट्दा पनि ताली बजाउने गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ऋचा र ‘छक्का पञ्जा’ युनिटबीच सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, प्रियंका कार्की, वर्षा राउतलगायत सबै यस काण्डमा मुछिएका थिए । पछि ऋचा शर्माले ‘छक्का पञ्जा’ चलचित्र विरोधी अभिव्यक्ति नदिएको पुष्टि भएपछि यो घटना त्यत्तिकै सेलाएर गएको थियो ।
पछिल्लो पटक भने ऋचा शर्मा एक नवनायिकाको हर्कतका कारण विवादमा आएकी छन् । घटना केही समयअघिको हो । रवि डंगोल बेइमानले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘फिर्के’ को सेटमा नायिकाद्वय ऋचा र कृष्टि पौडेल थिए । सुटिङ चलिरहेको थियो । सेट नजिक एउटा मात्र कुर्सी थियो, जसमा कृष्टि बसेकी थिइन् । कुर्सी नभएपछि ऋचा भने उभिरहिन् । धेरै समयसम्म उभिनु परेपछि रिसाउँदै ऋचाले फिल्म युनिटका सदस्यलाई भनिन्, ‘कुर्सी छैन ?’ तर, कसैले पनि उनको कुरा सुनेनन् । कुर्सीमा बसेकी कृष्टिले मलाई किन भनेको भन्दै ऋचालाई सोधिन् । जवाफमा ऋचाले तँ जस्तो नयाँ कलाकारसँग म किन रिसाउनू ? भन्न पुगिन् । त्यसपछि दुवैबीच विवाद सुरु भयो । विवाद बढ्दै जाँदा झन्डै हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको फिल्म युनिटका एक कलाकारको भनाइ छ । झगडापछि दुवै नायिका सुटिङको सेट नै छाडेर हिँडेका थिए ।
ऋचा र कृष्टिबीच विवाद हुनुको कारण पछाडि चलचित्रमा रहेको भूमिका रहेको बताइन्छ । ‘फिर्के’ मा सुलेमान शंकर र कृष्टि पौडेलको मुख्य भूमिका रहेको छ । ऋचा शर्मा भने गेस्ट रोलमा छिन् । ‘फिर्के’ मा अर्पण थापाले पनि अभिनय गरेका छन् । आफ्नो भन्दा धेरै रोल कृष्टिको भएकाले ऋचा उनीसँग क्रुद्ध बनेको बताइन्छ । कृष्टि अहिले नर्वे पुगेकी छन् । उनी चलचित्रको केही दृश्य सुटिङ र डबिङ छाडेर विदेश उडेको बताइएको छ । ‘फिर्के’ को हालै ट्रेलर लन्च भएको थियो । तर, सो कार्यक्रममा ऋचा शर्मा उपस्थित थिइनन् ।
‘फिर्के’ को ट्रेलर लन्चमा कलाकार निर्माता दीपकराज गिरीलाई देखेपछि सबै चकित परेका थिए । दीपकराज ‘फिर्के’ को ट्रेलर लन्चमा देखिनुको मुख्य कारण ऋचालाई कृष्टिले ‘गेट वेल सुन’ भन्नु रहेको खुलेको छ । ‘फिर्के’ को ट्रेलर लन्च हुनु केही दिनअघि मात्रै कृष्टिले ऋचा शर्मालाई ‘गेट वेल सुन’ भनेर फेसबुकमा स्टाटस राखेकी थिइन् । ‘फिर्केमा ऋचा शर्मासँग काम गर्दा निकै दुखद अनुभव भयो, उनको व्यवहारले ममा ह्यारेसमेन्ट भयो । म यतिबेला शतप्रतिशत के निष्कर्षमा पुगेकी छु भने ऋचाको मानसिक अवस्था ठीक छैन, गेट वेल सुन’, उनले लेखेकी छन् । तर, चौतर्फी विरोध र आफ्नो आलोचना हुन थालेपछि कृष्टिले फेसबुकबाट स्टाटस डिलिट गरेकी छन् । डिलिट गर्नुअघि कृष्टिले ऋचाविरुद्ध लेखेको स्टाटसको स्क्रिन सट निर्देशक रवि डंगोललाई पठाएकी थिइन् ।
आफ्नो श्रीमान्सँग डिभोर्स गर्ने नेपाली नायिकाको सूची लामो छ । यस्तो सूचीमा थपिएकी छन् नायिका रिमा विश्वकर्मा । दुई वर्षअघि रिमाले भव्य समारोहका बीच बेलायतनिवासी रोबर्ट विश्वकर्मासँग बिहे गरेकी थिइन् । बिहेपछि रिमा नेपालमै र रोबर्ट बेलायतमा बस्दै आएका थिए । सम्भवतः टाढा बसेकाले होला, दुईबीच आत्मीयता गाढा हुनै पाएन । त्यसैले उनीहरूको सम्बन्ध डिभोर्समा पुगेर टुंगिएको छ ।
रोबर्टले मोरङकी वर्षा रसाइलीसँग इन्गेजमेन्ट गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै रिमाको डिभोर्सको पुष्टि भएको हो । जबकि, उनीहरूको डिभोर्स तीन हप्ताअघि नै भएको थियो । रिमाले उक्त कुरालाई गोप्य राख्दै आएकी थिइन् । मिडियाबाट धेरैले सम्पर्क राख्ने प्रयास गरेपछि रिमा आफैँले आफ्नो डिभोर्ससँग सम्बन्धित स्टाटस फेसबुकमा लेखिन् । उनले तत्काल व्यक्तिगत सम्बन्धबारे प्रश्न नगर्न अनुरोध गरेकी छन् ।
‘म अनि मेरो परिवारका लागि यो त्यति सजिलो समय होइन । तर पनि मलाई सद्भाव प्रकट गर्ने मेरा मिडियाका साथीहरू, शुभेच्छुकहरू अनि मेरा आफन्तहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । अहिले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन असमर्थ छु । यतिवेला मेरो भावनात्मक र मानसिक अवस्था बुझिदिनुहुनेछ र म अनि मेरो परिवारका लागि केही समय दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ,’ उनले लेखेकी छन् । साथै उनले आफूले यस्तो दिनको कल्पना नगरेको बताएकी छन् । आफ्नो जीवनमा घटेको यो घटनाले आफ्नो करियरमा असर गर्न नदिने रिमाको भनाइ छ ।
Tarun Khabar0response बिहिबार,१३ पुष २०७४ 148 Views
सधैं चर्चामा किन आउँछन् साम्राज्ञी र अदिती ?
प्रियंका कार्की र सृष्टि श्रेष्ठ बलिउडमा !
सुरुमा प्रेममा पर्ने, सम्बन्ध गाँसेर चर्चा पाएपछि छुट्टिने
शुक्रबार,१७ कार्तिक २०७४
चलचित्र प्रमोसनमा देखिन चाहँदैनन् नेपाली कलाकार
बुधबार,१ कार्तिक २०७४